နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပမ်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ လူမမာတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒ… - MM Live News
နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပမ်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ လူမမာတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒ…
March 18, 2020 MM Live News
နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပမ်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ လူမမာတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒ…
( ၁ ) စကားပြော ဖို့ကိုပင် မနည်းအားယူနေရမယ့် အချိန်မှာ နေကောင်းလား၊ သက်သာလား ဆိုတဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေ မဖြေချင်တော့ပါ … ။
( ၂ ) ရေမွှေး ဆွတ်ပြီး ငါ့အနား လာမရပ်ပါနဲ့ ! ( အမွှေးနံ့၊ ချွေးနံ့၊ ဟင်းနံ့တွေ ကိုတောင် မခံနိူင်တော့တာကိုသတိပြု မိပါစေ )
( ၃ ) ဝတ္တရား အရ လူနာ မေးလာရင်း ဆယ်လ်ဖီ လာမဆွဲပါနှင့် ! ( ထွက်ခွာ ရတော့မယ့် ငါ့ကိုဘေးနားထားပြီး သင်ပျော်ပြ မနေပါနှင့် ၊ ငါ့ကို ချစ်ရင် အားနာပါ ၊သံဝေဂ လိုလို ဘာလိုလိုနှင့် ငါ ချစ်တဲ့သူတွေကို ငါ့ရုပ်သွင်အား မပြပါနှင့် )
( ၄ ) လူနာ မေးလာတဲ့ အခါ ငါ လေလည်ချင် တာတွေ ကျင်ငယ် စွန့်ချင် တာတွေ ကျင်ကြီး စွန့်ချင်တာတွေကို အောင့်ထား ရတဲ့ အခါ ငါ့ အတွက် တကယ်ပင်ပမ်းလွန်း လို့ပါ … ။
( ၅ ) ငါ မတတ် နိုင်လို့ ဆေးဖိုး ဝါးခတွေ ပေးတဲ့ အခါ ငါမသိအောင် ပေးပေးပါ ။ နောက်ဆုံးထွက်သက် မှာကျေးဇူးတရား တွေက ငါ့ကို အင်အားထက် ဖိအားတွေဖြစ်ချင် ဖြစ်သွား စေနိုင် လို့ပါ … ။
( ၆ ) ကျေးဇူးပြုပြီး သူများ အကြောင်းတွေ ငါ့ကို လာမပြောပါနဲ့ နောက်ပိုင်း သံယောဇဉ် တွေ ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရသူ အတွက် စိတ် အနှောက်အယှက် ကြီးစွာဖြစ်ရ ပါတယ် သိလည်း မသိချင် တော့ပါလေ ။
( ၇ ) ကလေးတွေ ခေါ်မလာ ပါနှင့် ကလေး ငိုသံ ၊ကလေးဆူသံ ၊ ပြေးလွှား ဆော့ကစားသံ တွေက ငါ့အာရုံကို အနှောက် အယှက် ကြီးစွာ ဖြစ်ရ ပါတယ်။
( ၈ ) ခြေစမ်းလိုက် ၊ လက်စမ်းလိုက် ၊ ကြွက်သားစမ်းလိုက် ၊ အင်္ဂါ ကြည့်လိုက် ၊ ဝမ်းကြည့် လိုက်တွေလာမလုပ် ကြပါနှင့် တော့ ဝေဒနာ ခွာနေ တဲ့ ငါ့ အတွက် ဒေါသကို ဖြစ်သွား စေနိုင် ပါ တယ် … ။
( ၉ ) တစ်ယောက် တစ်မျိုး ဆေးနည်းတွေ လာမပေးကြပါနှင့် အကြံတွေ လာမပေးကြပါနှင့်ျမျှာ်လင့်ချက်တွေ လာမပေး ပါနဲ့တော့ သက်တောင့် သက်သာသွားနိူင်ရင်ပဲ ကျေနပ် လှပါပြီ … ။
( ၁၀ ) ကိုယ့်နှလုံး ခုန်သံ ၊ နာရီ ချက်ချက် မြည်သံတွေကပဲ ကျယ်လောက် စွာ ကြားနေ ရတာမို့ စကားတွေ အကျယ်ကြီး လာမပြော ကြပါနှင့် ၊ တရားတွေ အကျယ်ကြီး ဖွင့်မပေး ကြပါနဲ့ … ။ ( ဆေးမကူဘဲ အိပ်ပျော်ဖို့ တေါင် မနည်းကြိုးစား နေရတဲ့အခါ၊ နှုတ်ကလိုက်ရွတ် နေမိတဲ့အခါ ပိုပင်ပမ်း ရပါတယ် )
( ၁၁ ) အကျင့်မရှိတဲ့ ငါ ၊ အားမကောင်းတဲ့ ငါ တခြားတရားတွေ ငါမနာနိူင်တော့၊ အာရုံမပြု နိူင်တော့တာမို့ပရိတ် ၊ ပဠာန်းလောက်ပဲ ခပ်ဝေးဝေး ကနေ တိုးတိုးလေး သာဖွင့်ပေးထားပါ … ။
( ၁၂ ) အနား လာပြီး ယပ်တွေ မခတ်ပေးကြပါနှင့်ခေါင်း လေတိုးသံက ဆံပင်ကို ဖြတ်ပြီး မွေးညှင်းပေါက်လေးများစီ သွားနေတာက ပဲ အတော် ခံစားရလို့ပါ … ။
( ၁၃ ) အနားမှာ စုပြုံပြီး လာမတိုးကြပါနှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို မနည်း လုရှူနေရတာမို့ နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာ အသက်ဝဝရှုသွားပါရစေ … ။
( ၁၄ ) သားတွေချွေးမတွေ စကားပြောသံ၊ဆူပူသံ၊မြေးတွေဆူညံသံတွေ၊ဇွန်းသံခွက်သံတွေမလုပ်ကြပါနှင့်၊တိတ်ဆိတ်စွာနေပေးခြင်းဖြင့် ငါ့အားကူညီကြပါ …။
( ၁၅ ) ဟိုဟာပေးမလား ဒီဟာပေးမလား လာမစနောက်ကြပါနှင့် ငါ့အားကိုယ်ချင်းစာပေးကြပါလော့ပစ္စည်းစွဲအောင် အစမဖော်ပေးကြပါနဲ့ …။
( ၁၆ ) သတိလည်အောင် နာမည်တရရခေါ်တာ၊နာမည်နဲ့လူတွဲပြောခိုင်းတာတွေ ရှောင်ပါ။ လူနာမည်မှတ်မိဖို့ထက် ဘုရားမမေ့သွားဖို့က ပိုအဓိကပါ …။
( ၁၇ ) ငိုသံ၊ရှိုက်သံတွေ မထွက်မိအောင် ထိန်းပေးကြပါ။ အနှောင်အတွယ်မဲ့စွာ ထွက်ချင်လို့ပါ …။
အရိပ်အကဲနားလည်တဲ့သူတစ်ယောက် ဘေးနားရှိ နေပေးရင်ကိုပဲ အဆင်ပြေပါပြီ ………( အာခေါင်ခြောက်တတ်တာမို့ နှုတ်ခမ်းလေးတော့ ရေမကြာမကြာဂွမ်းစလေးနဲ့ ဆွတ်ဆွတ်ပေး )….။Thet Naing Linn
နောကျဆုံးထှကျသကျကို ပငျပမျးကွီးစှာ ဖွတျကြျောနရေတဲ့ လူမမာတဈယောကျရဲ့ နောကျဆုံးဆန်ဒ…
( ၁ ) စကားပွော ဖို့ကိုပငျ မနညျးအားယူနရေမယျ့ အခြိနျမှာ နကေောငျးလား၊ သကျသာလား ဆိုတဲ့ သငျ့မေးခှနျးတှေ မဖွခေငျြတော့ပါ … ။
( ၂ ) ရမှေေး ဆှတျပွီး ငါ့အနား လာမရပျပါနဲ့ ! ( အမှေးနံ့၊ ခြှေးနံ့၊ ဟငျးနံ့တှေ ကိုတောငျ မခံနိူငျတော့တာကိုသတိပွု မိပါစေ )
( ၃ ) ဝတ်တရား အရ လူနာ မေးလာရငျး ဆယျလျဖီ လာမဆှဲပါနှငျ့ ! ( ထှကျခှာ ရတော့မယျ့ ငါ့ကိုဘေးနားထားပွီး သငျပြျောပွ မနပေါနှငျ့ ၊ ငါ့ကို ခဈြရငျ အားနာပါ ၊သံဝဂေ လိုလို ဘာလိုလိုနှငျ့ ငါ ခဈြတဲ့သူတှကေို ငါ့ရုပျသှငျအား မပွပါနှငျ့ )
( ၄ ) လူနာ မေးလာတဲ့ အခါ ငါ လလေညျခငျြ တာတှေ ကငျြငယျ စှနျ့ခငျြ တာတှေ ကငျြကွီး စှနျ့ခငျြတာတှကေို အောငျ့ထား ရတဲ့ အခါ ငါ့ အတှကျ တကယျပငျပမျးလှနျး လို့ပါ … ။
( ၅ ) ငါ မတတျ နိုငျလို့ ဆေးဖိုး ဝါးခတှေ ပေးတဲ့ အခါ ငါမသိအောငျ ပေးပေးပါ ။ နောကျဆုံးထှကျသကျ မှာကြေးဇူးတရား တှကေ ငါ့ကို အငျအားထကျ ဖိအားတှဖွေဈခငျြ ဖွဈသှား စနေိုငျ လို့ပါ … ။
( ၆ ) ကြေးဇူးပွုပွီး သူမြား အကွောငျးတှေ ငါ့ကို လာမပွောပါနဲ့ နောကျပိုငျး သံယောဇဉျ တှေ ဖွတျဖို့ကွိုးစားနရေသူ အတှကျ စိတျ အနှောကျအယှကျ ကွီးစှာဖွဈရ ပါတယျ သိလညျး မသိခငျြ တော့ပါလေ ။
( ၇ ) ကလေးတှေ ချေါမလာ ပါနှငျ့ ကလေး ငိုသံ ၊ကလေးဆူသံ ၊ ပွေးလှား ဆော့ကစားသံ တှကေ ငါ့အာရုံကို အနှောကျ အယှကျ ကွီးစှာ ဖွဈရ ပါတယျ။
( ၈ ) ခွစေမျးလိုကျ ၊ လကျစမျးလိုကျ ၊ ကွှကျသားစမျးလိုကျ ၊ အင်ျဂါ ကွညျ့လိုကျ ၊ ဝမျးကွညျ့ လိုကျတှလောမလုပျ ကွပါနှငျ့ တော့ ဝဒေနာ ခှာနေ တဲ့ ငါ့ အတှကျ ဒေါသကို ဖွဈသှား စနေိုငျ ပါ တယျ … ။
( ၉ ) တဈယောကျ တဈမြိုး ဆေးနညျးတှေ လာမပေးကွပါနှငျ့ အကွံတှေ လာမပေးကွပါနှငျ့ မြျှာလငျ့ခကျြတှေ လာမပေး ပါနဲ့တော့ သကျတောငျ့ သကျသာသှားနိူငျရငျပဲ ကနြေပျ လှပါပွီ … ။
( ၁၀ ) ကိုယျ့နှလုံး ခုနျသံ ၊ နာရီ ခကျြခကျြ မွညျသံတှကေပဲ ကယျြလောကျ စှာ ကွားနေ ရတာမို့ စကားတှေ အကယျြကွီး လာမပွော ကွပါနှငျ့ ၊ တရားတှေ အကယျြကွီး ဖှငျ့မပေး ကွပါနဲ့ … ။ ( ဆေးမကူဘဲ အိပျပြျောဖို့ တေါငျ မနညျးကွိုးစား နရေတဲ့အခါ၊ နှုတျကလိုကျရှတျ နမေိတဲ့အခါ ပိုပငျပမျး ရပါတယျ )
( ၁၁ ) အကငျြ့မရှိတဲ့ ငါ ၊ အားမကောငျးတဲ့ ငါ တခွားတရားတှေ ငါမနာနိူငျတော့၊ အာရုံမပွု နိူငျတော့တာမို့ပရိတျ ၊ ပဠာနျးလောကျပဲ ခပျဝေးဝေး ကနေ တိုးတိုးလေး သာဖှငျ့ပေးထားပါ … ။
( ၁၂ ) အနား လာပွီး ယပျတှေ မခတျပေးကွပါနှငျ့ခေါငျး လတေိုးသံက ဆံပငျကို ဖွတျပွီး မှေးညှငျးပေါကျလေးမြားစီ သှားနတောက ပဲ အတျော ခံစားရလို့ပါ … ။
( ၁၃ ) အနားမှာ စုပွုံပွီး လာမတိုးကွပါနှငျ့ အောကျဆီဂငျြကို မနညျး လုရှူနရေတာမို့ နောကျဆုံးထှကျသကျမှာ အသကျဝဝရှုသှားပါရစေ … ။
( ၁၄ ) သားတှခြှေေးမတှေ စကားပွောသံ၊ဆူပူသံ၊မွေးတှဆေူညံသံတှေ၊ဇှနျးသံခှကျသံတှမေလုပျကွပါနှငျ့၊တိတျဆိတျစှာနပေေးခွငျးဖွငျ့ ငါ့အားကူညီကွပါ …။
( ၁၅ ) ဟိုဟာပေးမလား ဒီဟာပေးမလား လာမစနောကျကွပါနှငျ့ ငါ့အားကိုယျခငျြးစာပေးကွပါလော့ပစ်စညျးစှဲအောငျ အစမဖျောပေးကွပါနဲ့ …။
( ၁၆ ) သတိလညျအောငျ နာမညျတရရချေါတာ၊နာမညျနဲ့လူတှဲပွောခိုငျးတာတှေ ရှောငျပါ။ လူနာမညျမှတျမိဖို့ထကျ ဘုရားမမသှေ့ားဖို့က ပိုအဓိကပါ …။
( ၁၇ ) ငိုသံ၊ရှိုကျသံတှေ မထှကျမိအောငျ ထိနျးပေးကွပါ။ အနှောငျအတှယျမဲ့စှာ ထှကျခငျြလို့ပါ …။
အရိပျအကဲနားလညျတဲ့သူတဈယောကျ ဘေးနားရှိ နပေေးရငျကိုပဲ အဆငျပွပေါပွီ ………( အာခေါငျခွောကျတတျတာမို့ နှုတျခမျးလေးတော့ ရမေကွာမကွာဂှမျးစလေးနဲ့ ဆှတျဆှတျပေး )….။Thet Naing Linn
ယခုရှိဆိုရင် ၁၁၁ နှစ်ရှိရော့ပေါ့…..မြနန်းနွယ်
မီးရထားနှစ်​စင်းတိုက်​တော့မယ့်​ အခြေအနေကို မီးရထားအလံပြဝန်​ထမ်းနေရာအတွက်​ အလုပ်​လာလျှောက်​တဲ့ကောင်​လေးကိုမေးကြည့်​မိတဲ့အခါ
နောက်ထပ်တစ်ခေါက် ရွှေတိဂုံဘုရားကို ပြန်လာဖို့ လုံးဝမသေချာတော့ဘူးဆိုတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်
February 10, 2019 February 12, 2019 MM Live
“သင် ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ပြီလား “
March 17, 2019 MM Live News